Mahjong. 🥇 Gali oo ka raaxayso Emulator.online
Mahjong. MahJong waa ciyaar sirdoon ah oo u baahan fiiro gaar ah, xigmad iyo aragti. Baro sida loo ciyaaro Mah Jong, samee isku-darka ugu macquulsan uguna guuleysta weyn.
Mahjong: Sida Loogu Ciyaaro Talaabo Talaabo 🙂
In la ciyaaro Mahjong khadka tooska ah ee bilaashka ah, waa inaad sameysaa raac tilmaamahan talaabo talaabo ah:
Tallaabada 2. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u gasho websaydhka, ciyaarta ayaa mar hore lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Kaliya waa inaad garaac ciyaarta oo waxaad bilaabi kartaa inaad ku ciyaarto isla gogo 'si aad u baabi'iso.
Tallaabada 3. Waa kuwan badhamno waxtar leh. Karaa "Ku dar ama ka saar codka", ku dhufo" badhankaPlay"oo bilow ciyaarta, waad awoodaa"Hakad"oo jooji, weydii"caawin"ama"Dib u Bilow"wakhti kasta.
Tallaabada 4. Nadiifi dhammaan lamaanaha illaa cayaartu dhammaato, had iyo jeer xusuusinta sharciyada ciyaarta. Dhamaadka, waxaad awoodi doontaa inaad diiwaangeliso magacaaga iyo ku wadaag baraha bulshada mar hadaad ciyaarta dhamayso.
Tallaabada 5. Kadib markaad dhamaysato ciyaar, guji "Ciyaaraha" in lagu ciyaaro khariidado kale.
Sidoo kale eeg Sharciyada Rasmiga ah ee Mahjong hadaad rabto inaad ogaato sharciyeynta rasmiga ah ee caalamiga ah ee ciyaartan caanka ah.
Waa maxay Mahjong?
Mah Jong waa jCiyaar asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha oo ay ciyaaraan 4 ciyaartoy waana mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan ee maanta la qaddariyo. Waa ciyaar xisaabeed, xirfad iyo istiraatiijiyad ciyaarteeduna aad ugu eg tahay tan dino.
Ciyaarta ayaa leh Qeybaha 144 oo kuwani waxay leeyihiin astaamo iyo astaamo u gaar ah Shiinaha, kaas oo u oggolaanaya xaqiijinta dhowr isku dhafan oo kala duwan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira noocyo gobol oo kala duwan oo isticmaala tiro kala duwan oo qaybo ah.
Ujeeddada ugu weyn ee ciyaarta ayaa ah in la noqdo kan ugu horreeya ee sameeya gacan sax ah oo buuxisa shuruudaha dhibcaha ugu yar. Qiimaha gacanku waa mid is bedbeddela oo waxaa lagu qeexaa dhibaatada ay leeyihiin isku-darka ka samaysan.
Taariikhda ciyaarta mahjong waa mowduuc aad looga doodo khubarada. Qaarkood waxay u maleynayaan inay leedahay in ka badan 2500 sano qaar kalena waxay ku andacoodaan inay bilaabeen qarnigii XNUMXaad ama XNUMXaad. Kahor qarnigii XNUMXaad, hase yeeshe, ma jiraan diiwaanno taariikhi ah.
Sida laga soo xigtay halyeeyga Shiinaha, falsafadda Shiinaha Confucius Wuxuu ku lug lahaa hindisaha ciyaarta guddiga. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax caddayn cilmi ah oo tan loogu talagalay. Tani waa halyeey ama quraafaad leh waxyaabaha soo socda:
Naag qurux badan oo aad u cidlo badneyd mar ku nooleyd maxkamada King Wu. Waxaan ku sigtay inaan dhinto. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu bilaabay inuu sawiro tirooyin ka kooban bamboo iyo fool-maroodi oo u eg qaabka dhagxaanta domino. Markuu dhammeeyey, wuxuu keenay gabdhihiisii ​​oo bilaabay inuu la ciyaaro. Confucius ayaa la sheegay inuu sii horumariyey ciyaartan.
Waxaa laga tarjumay Shiinaha waxaa loola jeedaa "Mahjong" iyo sidoo kale "shimbir ku sheekaysanaya"iyo, sida laga soo xigtay halyeeyga, ciyaarta guddiga ayaa heshay magacan maxaa yeelay a Confucius wuxuu jeclaa dhammaan noocyada shimbiraha. By habka, kaliya sharafta ayaa loo oggolaaday inuu ciyaaro ciyaarta. Haddii dadka caadiga ahi ciyaaraan, sharciga way jabinayeen.
Taariikhyahanadu, dhanka kale, waxay rumeysan yihiin in ciyaarta mahjong asal ahaan ka soo jeeda ciyaarihii kaararka Shiinaha ee qadiimiga ahaa ee lagu diiwaan geliyey Shiinaha qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad. Waxay raadraac asalka ciyaarta in goobaha of Shanghai, Anhwei iyo Kiangsu, sida caddaynta ciyaaraha kaararka noocan oo kale ah ayaa laga helay halkan.
Qeybaha ciyaarta Mahjong 🀄🀩
Jadwal joogto ah ayaa ka kooban 136 ama 144 gogo '. Noocyada Mahjong waxaa loo qaybiyaa qaybo kala duwan:
Gabdhaha ku habboonGoobo"
Gabdhaha ku habboonbaasaboorka".
Gabdhaha ku habboonAstaanta".
Cadad ka mid ah Saddexda Dragons.
Cadad xilliyeedyo ah.
Ciyaarta online Mahjong
Mahjong wali waxaa loo ciyaaraa sidii a ciyaar dhaqameed. Si kastaba ha noqotee, maaddaama cayaaraha internetka ay noqdeen kuwo caan ah, kuma qaadan waqti dheer noocyada kala duwan ee Mahjong inay ka soo baxaan internetka.
Maanta, ciyaarta guddiga qaabkeeda khadka tooska ah xitaa waa mid ka mid ah cayaaraha ugu caansan iyo, sida ciyaarta flash, waxaa guud ahaan lagu bixiyaa bilaash. Sidaas ayuu isagu ciyaarta mahjong waxaa loo heli karaa ciyaar khadka tooska ah oo noocyo kala duwan leh oo ujeeddooyin kala duwan leh. Noocyada ugu caansan ee ciyaarta dhaqanka maanta waxaa ka mid ah:
Madow iyo caddaan 2
Mabda'a aasaasiga ah ee ciyaarta ayaa ah taas dhammaan qaybaha waa in lagu sifeeyaa laba-labo waqti kasta oo la siinayo. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah dhagsii lammaane u dhigma (ujeeddooyin isku mid ah) Si kastaba ha noqotee, dhagxaanta waa la qaadi karaa oo keliya haddii aysan ku daboolin dhagaxyo kale.
Waa inaad uga tagtaa bilaash ugu yaraan hal dhinac. Waxay kuxirantahay sida dhagxaantu yihiin, dabcan way dhici kartaa, lamaane dambe lama kashifayo. Ciyaartu way dhammaatay. Ciyaarta waxaa si fudud loogu xakameeyaa jiirka.
Faa'iidada gaarka ah ee ciyaarta Mahjong waa in aysan kaliya kor u qaadin fikirka macquul ah, laakiin sidoo kale karti wax u fiirsashada iyo xusuusashada.
Noocyada kala duwan ee Mahjong
Sida laga soo xigtay diiwaanada, ganacsatada Shiinaha ayaa ciyaarta u keenay wadamada reer galbeedka. Xeerar kala duwan iyo qaababka ciyaarta ayaa halkan lagu allifay. Jumlaha JP Babock wuxuu doonayay inuu fududeeyo sharciyada waana sababta uu u daabacay buugga "Xeerarka Mah-JongNatiijo ahaan, Mahjong wuxuu noqday mid caan ah.
Nooca Mareykanka ee Mahjong si isdaba-joog ah ayaa loo beddelay oo wuxuu si weyn uga duwan yahay nooca asalka ah. Shuruucda dhaqamada kala duwan ayaa sidoo kale lagala dhaqmay dalal kale sida Japan ama Ingiriiska. Nooca Hong Kong iyo Kanton ee ciyaarta ayaa si joogto ah loo ciyaaraa maanta.
Noocyada Mahjong maanta🀧
Hong Kong Mhjong ama Cantonese Mahjong 🀄
Qaabka ugu isticmaalka badan ciyaarta waa Hong Kong Mhjong ama Cantonese Mahjong. Markii la ikhtiraacay hoolalka qamaarka ee khadka tooska ah, Japan waxay soo bandhigtay khamaar hooladeeda ah, taasoo u oggolaaneysa ciyaartooyda xiriiri kuwa kale ee ka kala yimid qaybaha kala duwan ee adduunka. Tani waxay ciyaarta ka dhigtay mid caan ah, noocyo cusub oo ka mid ah ciyaarta caanka ahna mar labaad ayaa la sii daayay.
Si xiiso leh, nooca Shiinaha ee asalka ah ciyaarta laguma ciyaarayo Shiinaha. Way yar yihiin taageerayaal daacad u ah reer galbeedka.
Shiinaha, iyo sidoo kale Hong Kong, nooc ciyaarta laga beddelay ayaa aad caan u ah. Qaar kale isbedelada ka dib 1930-yadii waxay Mahjong ka dhigtay ciyaar khamaar caan ah. Si ka duwan ciyaaraha kale ee fursad, Qofku kuma guuleysan karo ciyaar Mahjong kaliya inuu nasiib badnaa.
Ciyaarta ayaa u baahan istiraatiijiyad, xawaare iyo falanqeyn ciyaartoyda kale si loogu guuleysto. Tani waxay damaanad qaadaysaa Mahjong xaalad ka fiican oo ka maskax badan kulammada kale.
Farqiga u dhexeeya Mahjong waa inaad adigu kaligaa ciyaari karto. Waa inaad tirtirtaa dhammaan shaararka isku midka ah si aad u noqotid sayid Mahjong. Shaqadaadu waa inaad raadiso oo aad baabi'iso qaybo isku mid ah si aad u dhaliso. Ka bilow lakabyada kore iyo kan sare, oo ka shaqee dhanka bartamaha. Codka jamhuuriyadda soomaaliyaDib uga bilow haddii aysan jirin dhaqaaqyo sax ah oo haray!
Sharciyada Rasmiga ah ee Mahjong
Si aad si sax ah ugu ciyaarto Mah Jong, waxaad u baahan tahay inaad fahamto oo aad dhex-gasho fikradaha ugu waaweyn. Waa kuwan sharciyada rasmiga ah ee Mahjong. Dhammaan macluumaadka ku jira qodobkan waxaa laga soo saaray xeerarka Caalamiga ah ee Mahjong.
Waxaan rajeyneynaa inaad si buuxda uga faa'iideysan karto. 🙂
Maxaad ubaahantahay inaad kubilaawdo ciyaarida Mahjong?
144 ama 136 dhagaxyada Mahjong
Mah Jong, waa ciyaar ka kooban Qaybaha 144. Dhammaantood waxaa ku jira dhowr jilayaal Shiinaha iyo astaamo u oggolaanaya xaqiijinta isku-dhafnaan kala duwan. Qeybaha ka kooban ciyaarta Mah Jong waa kuwan soo socda:
Chips caadi ah
Foornooyinka caadiga ah waxaa laga tiriyaa 1 illaa 9, oo markooda loo qaybiyaa saddex dacwadood:
Wareegyo ama kubbado
Kaar kasta waxaa ku yaal afar isku mid ah (taasi waa, waxaan lahaan doonnaa, tusaale ahaan, afar kaar oo ah Saddexda astaamo). Foornooyinka caadiga ah waxaa sidoo kale loogu yeeraa magacyo kale:
Si aad u jajabiso Uno y Sagaal (1 iyo 9) ee dacwad kasta sidoo kale waxaa loo yaqaan "Terminalka".
Jilbaha u dhexeeya back iyo Sideed (2-8) ee dacwad kasta waxaa loo yaqaan "fudud".
Calaamado gaar ah
Waxaan ka heli karnaa laba nooc oo jajab khaas ah:
Ubaxyo iyo xilliyo Tokens
Foornooyinkaas waxaa loogu yeeraa mid gaar ah maxaa yeelay waxay dhaliyaan si ka duwan kuwii caadiga ahaa.
Astaamaha sharafta ayaa sida caadiga ah astaamaha ugu qiimaha badan ciyaarta, kaliya maahan inay u qalmaan dhibco badan, laakiin mararka qaarkood waxay ku dhuftaan qiimaha dhibcaha oo dhan gacanta.
Ubaxa iyo astaamaha saldhigga waa in la muujiyaa isla marka aad baxdo, waxaana loo isticmaalaa oo kaliya in lagu kasbado dhibcaha qaar, oo waxay qaataan calaamado kale mar kale. Uma muuqdaan inay saameyn ku yeelanayaan ciyaarta lafteeda wax badan, waana sababta loogu yeero "gunno gunno".
Waxaa jira sharciyo badan oo Mahjong ah oo aan tixgelin ubaxyada iyo marmarka xilliyeed, iyaga oo ka saaraya ciyaarta.
Astaamaha sharafta waxaan ku kala saari karnaa laba nooc:
Dragons: casaan, cagaar iyo cadaan.
Dabaylaha: ka imanaya Bariga, Koonfurta, Galbeedka iyo Waqooyiga.
Sida calaamadaha caadiga ah, calaamadda sharaf kasta waxaa lagu celceliyaa afar jeer (marka waxaa jira astaamaha 4 South Wind, tusaale ahaan).
Ugu dambeyntiina, waxaan leenahay ubaxyada iyo marmarka xilliyada, oo isku daraya siddeed taayirro:
afar flores: badiyaa waxay leeyihiin sawir-gacmeedka midab buluug ama madow ah, oo lagu tiriyo casaan.
afar xilliyada: waxay had iyo jeer leeyihiin sawirro muuqaal ah oo casaan ah, oo lagu tiriyay buluug ama madow.
Ubaxyada iyo xilliyadu waxay xiriir toos ah la leeyihiin dabaysha, waxaana loo adeegsadaa in lagu dhaliyo astaamo gunno ah oo la xiriirta dabayl kasta:
La ubax 1 iyo xarunta 1, waxay la xiriiraan dabaysha Este.
Ubaxa 2 iyo xarunta 2, oo leh dabaysha On.
Markaan ka hadlayno ubax ubax 3 iyo xarunta 3, oo leh dabaysha Oeste.
La ubax 4 iyo xarunta 4, oo leh dabaysha Waqooyiga.
Ujeedada ciyaarta ayaa ah hel dhibco badan intii suurtagal ah in lagu kasbado "Sameynta Mahjong".
Si aad ugu sameyso Mahjong RCM waxaad u baahan tahay inaad yeelato 8 dhibcood ugu yaraan (oo aan ku jirin dhibcaha ubax / xilli), markaa waa inaad si fiican u ogaataa dhaqaaqa.
Ciyaar Mahjong oo dhameystiran waxay ka kooban tahay 16 gacmo ama ciyaaro, oo loo qeybiyay wareegyo: 4 wareeg oo min 4 kulan ah.
In kasta oo ciyaar buuxda ay tahay 16 gacmo ama ciyaaro, inta badan tartamada waxaa lagu ciyaaraa waqtiga. Caadi ahaan, ciyaaruhu waa 90 daqiiqo ama 2 saacadood.
Wareeg kasta wuxuu leeyahay dabayl la xidhiidha, taas oo loo adeegsado in lagu dejiyo dhibcaha dhammaadka ciyaar kasta, oo taasna loo yaqaan dabaysha adkaata:
Wareegii 1aad: Dabaysha Bariga
Wareegii 2aad: Dabaysha koonfureed
Wareegii 3aad: Dabaysha Galbeed
Wareegii 4aad: Dabayl Woqooyi
Dabaylaha wareega kasta saameyn toos ah kuma yeelanayaan ciyaarta, kaliya dhibcaha. Dhamaadka wareeg kasta, a beddelka kuraasta.
Ka hor intaadan ciyaarin
Qeybinta dabaylaha waxaa la sameeyaa hal mar oo keliya, oo aan kala sooc lahayn, bilowga ciyaarta.
Dabayl kasta waxaa loo qoondeeyey meel go'an. Barigu waa inuu lahaadaa koonfur midigtiisa, woqooyi bidixdiisa iyo Galbeedka oo laga horeeyo.
Ogsoonow inaysan ku raacsaneyn calaamadaha halista ah!
Waxay kuxirantahay dabaysha taabatay isaga, ciyaartoy kasta waa inuu u fadhiistaa hadba booskaas. Qaybinta dabaylaha siyaabo badan ayaa loo samayn karaa, laakiin waxa ugu fudud ayaa ah:
Ciyaaryahan kasta oo tuuraya laadhuur isla markaana ku meeleynaya lambarro dabaylo wata (1 = Bariga, 2 = Koonfur, 3 = Galbeed, 4 = Waqooyiga iyo 5,6 = Duub markale).
Dhigida hal gabal oo dabayl kasta ah wajiga, iyo ciyaartoy kasta oo dooranaya gabal.
Ciyaar kasta kahor
Darbigu wuxuu ka kooban yahay 18 baloog de 2 tokens sare, sameynta laba jibbaaran, waana in la dhisaa bilowga gacan kasta ee ciyaarta.
Ciyaaryahan kasta waa inuu ka sameeyaa qaybtiisa derbiga adoo isku dhejinaya 18 saf oo dhaadheer dherer ah iyo 2 alwaax dherer ah, dhammaantoodna hoos u dhacaya.
Mar alla markii uu ciyaartoy kastaa dhisto dhinacooda gidaarka natiijada waa inay noqotaa laba jibbaaran oo ka kooban 18 baloog x 18 baloog.
Kahor qaybinta calaamadaha, waxaa lagama maarmaan ah in la arko dhinaca derbiga ah ee aan bilaabayno qaybinta.
Si tan loo sameeyo, ciyaaryahanka Este bilaabi doonaa laba laadhuu, kaas oo tilmaami doona dhinaca derbiga ay ku fidinayso jajabku.
Si loo ogaado qaybta derbiga halka ay ka bilaabmayso qaybintu, waxaa loo tirinayaa iyadoo ka bilaabanaysa Bariga oo la raacayo sida ay u socoto ciyaarta (saacad-diidka). Sidaa darteed, waxaad ku bilaabi doontaa qaybta bari ee derbiga haddii aad 5 ama 9 ku laabto laadhuu, qaybta koonfureed haddii aad rogto 2, 6 ama 10, iyo wixii la mid ah.
Tusaalaheena, Ciyaartooyga Bariga ayaa soo rogay 6 iyo 5, taasoo muujineysa in darbiga uu ka furmayo dhanka ciyaaryahanka Galbeedka (6 + 5 = 11).
Ciyaaryahankii ku yaalay qeybta hore ee darbiga lagu kala baxaayo ayaa mas'uul ka ah toogashada dadka kale 2 laadhuu kaas oo tilmaami doona xarkaha dusiyeen ee darbigu ka furmayo (taas oo ah, xarka laga soo qaadi doono alwaaxa). Tusaalaheena waa ciyaaryahanka reer Galbeedka.
Qeybinta jajabyada waxaa sameeya ciyaaryahan kasta oo qaadaya jajabkiisa.
Jaangooyada bilowga waxay noqon doontaa tan ku xigta tirada wadarta afarta laadhuu ee la tuuray (2da laadhuu si loo ogaado dhinaca darbiga halka ay ku fidintu ka bilaabmayso iyo labada laadhood ee kale si loo ogaado dhismaha).
Way bilaabmaysaa tiri min midig ilaa bidix dhinaca derbiga ee ay muujiyeen labada laadhuu ee ugu horreeya (marka laga eego aragtida laacibka ku jira qaybta darbiga ee uu ka furmayo. Xaaladdayada, ciyaaryahanka Galbeedka). Wuxuu qaataa block xiga Kudar 4 laadhuuga baloogga.
Nota: Ogsoonow inay dhici karto in wadarta 4 laadhuhu ay ka badan tahay 18 (taas oo ah ballaca hal dhinac oo derbiga ka mid ah). Xaaladdaas, xayndaabka ugu horreeya ee dhinaca xiga ee derbiga ayaa sii socda in la tiriyo illaa iyo inta wadarta laadhuhu ka gaarayaan.
Tusaalaheena, Reer Galbeedku waxay soo giringiriyeen 2 laadhuu kale iyo 4 iyo 5 ayaa la rogay.Sidaa darteed, qaybinta jajabyada waxaa laga samayn doonaa baloogga ku xigta block 20 (6 + 5 + 4 + 5 = 20). Taasi waa, waxaad bilaabi laheyd inaad darbiyada ka soo qaadatid darbiga ka xiga nambarka 20, adoo ka xisaabtamaya midig ilaa bidix (marka laga eego aragtida ciyaaryahanka reer Galbeedka) laga soo bilaabo darbiga koowaad ee dhanka ciyaaryahanka West.
Foornada ka hor bilowga lebiska qeybinta waxay noqon doontaa lebenkii ugu dambeeyay ee darbiga.
Tusaalaheena, leylinta ugu dambeysa ee darbiga waa saqafka sare ee baloog 20 (buluug ah), baarka laga soo qaadayo marmarka ayaa ah kan cas.
Gudaha RCM ma jiro derbi dhintay.
Ciyaaryahanka Bariga wuxuu qaadan doonaa labada baloog ee ugu horreeya calaamadaha (wadarta 4 calaamadood).
Baloogga leh calaamadda ugu dambaysa badanaa waa la rogaa (laakiin looma baahna) si uu si cad u muujiyo in dhinaca derbigu yahay dhammaadka. Balooggan waxaa rogi kara ciyaartoy kasta (badanaa ciyaaryahanka hortiisa ka dhisan ama ciyaaryahanka Bariga laftiisa).
Kadib ciyaaryahanka Koofurta ayaa qaadan doona labada baloog ee soo socda.
Kadib ciyaaryahanka reer Galbeedka ayaa qaadan lahaa labada soo socota.
Kadib ciyaaryahanka Waqooyiga labada baloog ee soo socda.
Mar dambe, ciyaaryahanka Bariga waxaa la siin doonaa laba baloog oo kale.
Oo sidaas iyo ilaa iyo inta ciyaaryahan kasta uu qaatay seddexdooda baloog oo ah 4 marmarka (taasi waa, bartaas marka uu jiro ciyaaryahan kasta waa inuu leeyahay 12 marmar wadar ahaan)
Ugu dambeyntiina, ciyaaryahanka Bariga wuxuu qaadan doonaa 2 marmar (dusha sare ee baloogyada lagu calaamadeeyay casaan).
Ka dibna ciyaartoyda Koonfur, Galbeedka iyo Waqooyiga waxay qaadan doonaan min 1 calaamadood.
Dhamaadka heshiiska, ciyaartoy kasta wuxuu yeelan doonaa 13 jibbaar, marka laga reebo Bariga, oo yeelan doona 14. Ciyaaryahankii Bariga ayaa laadhuuga dhigaya midigtiisa si uu u muujiyo inuu yahay Bariga.
Xeerarka Shiinaha ee Caadiga ah ee Dhintay Token
El xannibi meesha laga bilaabayo qaadashada jajabka waa baloogga ku yaal booska tilmaamaya wadarta saddex laadhuu duudduubay kahor.
Se tiri min midig ilaa bidix dhinaca aragtida qofka dhinacaas gidaarka ka ah.
Tusaalaheenna, baloogga bilowgu waa xayndaabka 12 ee dhinaca woqooyi ee derbiga ciyaaryahanka. Si kale haddii loo dhigo, waxaad ka bilaabi laheyd derbiyada gidaarka 12, oo ah jaantuska cas ee sawirka.
Markaad ogaato meesha aad ka bilaabi doontid qaadashada dusiyeen, waxaa jira koox dusiyeyaal ah oo aan loo adeegsan karin in lagu xado marmarka caadiga ah ciyaarta oo dhan. Astaamahan ayaa loo yaqaan derbi dhintay, oo iyagu waa 14 tokens (taasi waa, 7 baloog) oo kaliya u adeegta qaadashada jajabyo dheeri ah.
Siempre waa inuu joogaa 14 calaamadaha derbiga dhintay. Sidaa darteed, darbiga dhintey wuu dhaqaaqi doonaa maadaama foornada beddelka dheeriga ah laga soo qaatay. Haddii darbiga dhintay la gaadho iyada oo aan ciyaarta la dhammayn, ciyaarta ayaa loo tixgelin doonaa iyada oo aan cidina ku guuleysan (xaaladdan ayaa loo yaqaan gacanta null).
Tusaalaheenna, waa 14 taayir (7 baloog) oo dhinaca midig uga jira lebenka guriga. Iyagu waa baloogyada buluugga ah.
Marka dhismaha bilowga la aasaaso, heshiiska qarka ayaa bilaabmaya. Ciyaaryahan kasta wuxuu qaataa astaamahooda astaamaha sida kor lagu sharaxay *.
Kahor intaanan bilaabin, waa inaan xasuusnaano inay jiraan 3 isku-darka aasaasiga ah ama dhaqaaq ee Mahjong, laakiin si loo awoodo sameynta, xeerarka qaarkood waa in la raaco:
Waa a 3-taayil toosan isku xigxiga ee isku mid ah (Ojo, 3 marmar si sax ah, uma qalmaan jaranjarooyinka 2 ama 4 marmar).
Waa la abuuri karaa oo keliya:
iyadoo la tuurayo ciyaaryahanka bidix
ama astaamo laga soo qaaday darbiga.
Marka laga reebo: Haddii aad u baahan tahay oo keliya inaad sameyso Chi si aad u hesho Mahjong, waxaad ku sameyn kartaa gabal uu iska tuuray ciyaaryahan kasta (uma baahna inuu noqdo kan bidix ku yaal).
Fung / Fangas / Fangas
Waa isku darka of 3 dusiyeen u dhigma.
Waxaa lagu abuuri karaa iyadoo la tuurayo ciyaaryahan kasta.
Waa isku darka of 4 dusiyeen u dhigma.
Haddii aad soo bandhigtay a Fangas oo waxaad derbiga ka soo dhejisaa astaan ​​u dhiganta kuwa Pung, waad ballaarin kartaa Pung-ka oo waxaad sameysan kartaa Kong. (Ojo. Mar haddii uu Pung soo shaac baxo, waxaa lagu sii ballaarin karaa oo kaliya Kong iyadoo leh calaamadda aad hesho)
Haddii aad gacantaada ku haysatid 4 foornooyin isku mid ah, si ay ugu tirsadaan sidii Koong waa inaad muujisaa. Waa inaad 4-ta qaybood hoos u dhigtaa (qarsoon tahay, adigoon ogayn waxa ay tahay) oo aad u caddeysaa inay tahay Kong. Koong-kan, halkaasoo 4-ta tokko gacanta lagu hayey oo astaamaha lagu heesayo laakiin aan la muujin, ayaa loo yaqaan Kong qarsoon.
Ciyaartu waxay u dhacaysaa si isdaba joog ah, mar walbana waxay u dhacdaa hal jiho oo isku mid ah: saacad-diidka. Raac taxanaha: East-South-West-North-East -..., iyo wixii la mid ah.
Dareenka ciyaarta marwalba waa la raacaa, marka laga reebo marka ciyaaryahan aan markiisa lahaan doonin uu doonayo gabal uu iska tuuro ciyaaryahan kale si uu u sameeyo Pung, Kong ama Mahjong.
Marka ay sidaas tahay, amarku wuu jabay oo ciyaartu way u socon doontaa ciyaaryahankaas, laakiin markaa way sii socon doontaa mar kale iyadoo la tixraacayo tilmaamtii aan ka soo sheegnay ciyaaryahankaas.
Tusaale ahaan, ciyaaryahanka Bariga ayaa tuuraya calaamadda uu doonayo ciyaaryahanka reer Galbeedku. Marka ay sidaas tahay, dareenku wuu jaban yahay (maadaama ay tahay inuu noqdo ciyaaryahanka Koonfurta), ciyaarta waxaa raaci doona ciyaaryahanka reer Galbeedka, oo markuu qaato foornada la tuuray, ku tuuri doona mid ka mid ah shaarkiisa, ciyaarta ayaana u socon doonta ciyaaryahanka Waqooyiga. .
Kadib qaybinta jajabyada
Marka calaamadaha la qaybiyo, ubaxa iyo astaamaha saldhigga ee ciyaartoy kastaaba leeyahay, iyo suurtagalnimada Kong, waa in la muujiyaa (amar amar ah).
Ubaxa iyo xilliyada ayaa la muujiyaa marka hore, ka dibna Kong.
Iyagoo ka bilaabaya ciyaaryahanka Bariga una dhaqaaqaya jihada ciyaarta (Bariga-Koofur-Galbeed-Waqooyiga), ciyaartooydu waxay ku dhawaaqaan Ubaxa iyo Tokens-ka Xilliga ay haystaan, iyaga oo hor dhigaya hortooda iyo dhanka midig.
Ubax kasta iyo Calaamadaha xilliyada la muujiyey, ciyaaryahan kasta wuxuu ka qaadanayaa calaamadda cusub derbiga.
Astaamaha dheeriga ah ee laga soo qaado darbiga ubaxa / xilliyada ama Kong ayaa la yiraahdaa beddelaad ama jajab. Chips beddelaad ayaa laga soo qaadaa dhinaca dhamaadka darbiga. Tusaalaheena, sababtoo ah midabka buluuga ah.
Haddii mid ka mid ah marmarka cusubi uu ahaan lahaa mid kale Ubax iyo Xilliyo, waa la tusi lahaa oo leben kale ayaa laga qaadi doonaa darbiga dhammaadkiisa, iyo wixii la mid ah.
Ma jiro wax waajib ah si isla markiiba loo muujiyo midabada ubaxa / xilliyada xilli ama Kong. Waa la soo bandhigi karaa wakhti kasta inta lagu guda jiro ciyaarta illaa inta ciyaartu aysan dhammaan.
Cayaartu waxay ku bilaabmaysaa tuurista leylka uu u tuuray ciyaaryahanka Bariga (xusuusnow in Bariga ay ka bilaabato 14 marmar, halka inta kale ee ciyaartu ku bilaabmaan 13)
Ciyaarta ayaa la horumariyey had iyo jeer iyadoo la raacayo macnaha la sharraxay, waana la jebiyey oo keliya marka ciyaartoy aan haysan leexashadu ay rabto taayir la tuuray si uu u sameeyo Pung, Kong ama Mahjong. Markaa markale ayay u sii socon doontaa ciyaaryahankaas, iyadoo la raacayo isla dareenka ciyaarta.
Cayaartu waxay dhammaanaysaa marka laacibku Mahjong ka dhigo ama marmarka derbigu ka dhammaado.
Waqti kasta oo ciyaartoy tuuro sharooto, waa inay u dhigaan wajiga hore ee booskooda (waana sidaas sida ay ku sii jiri doonto inta ka hartay ciyaarta), safaf amar ah oo ah 6 marmar (safka ugu horeeya qeybta dhexe ee miiska iyo kuwa soo socda oo sii kordhaya) dhow).
Calaamad looma yeero. Kaliya iskudhafyada lagu sameeyay gabal ay iska tuuraan ciyaartoy kale, ubaxyada / saldhigyada ama Sameynta Mahjong (oo si cad u muujinaya Chi, Pung, Kong, Flower ama Mahjong / Hu) ayaa kor loogu hadlay.
Haddii ciyaaryahan uu doonayo inuu qaato calaamado (wuuna qaadan karaa) waa inuu sheegaa sida ugu dhakhsaha badan marka la tuurayo, xitaa haddii uusan ahayn kaligiis.
Tuubo la tuuray ayaa la qaadan karaa kaliya si loo sameeyo isku-dhaf, taas oo sidoo kale waa in loo muujiyaa wajiga ciyaartoyga intiisa kale.
Soojiidasho! Ma qaadan kartid foornada la tuuray si fudud si aad u ururiso, adigoon sameysan ciyaar.
Mar haddii lebbiska la tuuray cidina qaadanayn, looma isticmaali karo inta ka hadhay ciyaarta (taasi waa, haddii hadhow aannu danaynayno gacmo leben la tuuray ka hor, ma awoodi karno inaan qaadno).
Tuur kasta ka dib
Ka dib markaad tuurto calaamadda, 3 waxyaabo ayaa dhici kara:
Ciyaaryahan ayaa doonaya in lebenka la tuuray uu dhameystiro Pung ama Kong ama inuu sameeyo Mahjong.
Waa inaad tiraahdaa isla marka lagaa tuuro, xitaa haddii aysan kaligaa aheyn.
Waa inaad u soo bandhigtaa ciyaarta qaab ay u arki karaan ciyaartoyda intiisa kale inta ciyaarta ka hartay.
Haatan dalabkii ciyaarta ayaa u socon lahaa ciyaartoygan, kaasoo ay tahay inuu tuuro calaamadda.
¡Ojo, Ciyaaryahanku oo sawiraya leben la tuuray darbi kama qaadi karo darbiga! (Marka laga reebo sameynta Kong)
Haddii uu sameeyo Mahjong, wuxuu ka tagi doonaa lebbiska la jeexjeexay ee uu ku xidhayo isaga oo samaynaya isku darka uu ku guuleysto:
Laacibka midigta iska tuura ayaa raba calaamadda inuu sameeyo Chi.
Waa inay tiraahdaa sida ugu dhakhsaha badan marka la tuuro.
Ugu dambeyntiina, laacibku waa inuu tuuraa tuubada (Xusuusnow, ciyaartoy soo jiida foornada la tuuray derbiga kama qaadanayo, marka laga reebo inay sameysmeyso Kong).
Midkoodna ma doonayo calaamadda.
Tuulada la tuuray looma isticmaali karo inta ciyaarta ka harsan.
Ciyaaryahanka xiga ee nidaamka ciyaarta wuxuu qaadan doonaa foornada darbiga waana inuu tuuraa foornada kale.
U dagaallama foornada la tuuray
Haddii in ka badan hal ciyaaryahan sheegto isla calaamadda, amarka doorbididda qaadashada calaamaddu waxay noqon doontaa sidan soo socota:
Ciyaaryahan doonaya calaamadda in la sameeyo Mahjong (o Hu).
Laacibka u baahan calaamadda a Fangas ama a Kong.
Laacibka doonaya calaamadda inuu sameeyo a chi.
Nota: Haddii labo ama kabadan ciyaartoy ay rabaan isla lebbiska inay sameeyaan Mahjong, ciyaaryahanka ay markiisa ugu horeysa guuleysato dareenka caadiga ah ee ciyaarta. Kaliya hal ciyaaryahan ayaa guuleysan kara.
Xatooyada leben la tuuray
Marka uu ciyaartoy sawiro calaamado uu tuuray mid kale, waa inuu ridayaa calaamadda la xaday, oo u dhigaa si ay u muujiso cidda isaga siisay.
Tusaale ahaan, haddii ciyaaryahan uu sawiro calaamadda ay tuureen Ciyaaryahan bidixdiisa (3 of Bamboo ama 9 saxanno ah), waa inaad iskaga tagtaa iskudhafka iyadoo la fiirinayo calaamadda la jiiday oo bidix loo dhigay:
Haddii ciyaaryahan uu sawiro calaamada la tuuray ee ciyaaryahanka hore (a 9 of Discs), waa inaad banaanka soo dhigtaa isku darka lebenka la xaday ee la rogay oo la dhigayaa bartamaha.
Haddii ciyaaryahan uu sawiro calaamada la tuuray ee Ciyaaryahan dhanka midig (a 9 of Discs), waa inaad iskaga tagtaa iskudhafka iyadoo la fiirinayo lebbiska la xaday oo loo rogay dhinaca midig.
Kadib sameynta iskudhaf isku dhafan oo leh astaan ​​uu tuuray ciyaaryahan kale, isku darkaas waa in lagu daayaa muujinta inta ka harsan ciyaarta. qaybta saxda ah ee ciyaartoygii sameeyay.
Taasi waa, ubaxyada / saldhigyada iyo Kong, iyo sidoo kale iskudhafyada dusha laga tuuray, ayaa looga tagay dhanka midig ee ciyaartoy kasta.
Haddii marmarka gidaarku ka dhammaado oo aan cidna ku guuleysan ciyaarta way dhammaatay. Noocyada noocan ah ayaa loo yaqaan gacanta null.
Dhinaca kale, haddii uu ciyaartoy sameeyo Mahjong waa inuu tiriyaa dhammaan dhibcihiisa oo dhan isagoo cod dheer (xitaa dhibcaha ubaxyada), isagoo ka qaadanaya dushiisa la iska tuuray isku dar kasta ama taayil kasta oo dhibcaha keenaya (dhibic kasta dhibic la tuuray ama 10-kii dhibicba mar) wejiga la tuuray)
Marka hore, dhibcaha ciyaar kasta waa lagu daraa, si loo caddeeyo in la gaaray ugu yar 8-da dhibcood. Kadibna dhibcaha ubaxyada ayaa lagu darayaa.
Tan waxaa loo sameeyaa si loo caddeeyo xisaabinta miiska iyadoo aan loo isticmaalin qalin iyo warqad xisaabaadka.
Tusaale ahaan, haddii ciyaaryahan uu dhaliyay 12 dhibcood (tirinta dhibcaha ubaxa), waa inuu ka qaataa 12 calaamadood oo ka mid ah qashinkiisa:
Wuxuu sidoo kale qaadan karay 3 marmar (1 waji hoos = 10 dhibcood, 2 waji kor ah = 1 dhibic midkiiba)
Nota: Mar haddii hal ciyaaryahan dhaho Mahjong, ciyaartooyda kale waa inaysan tusin shaxdooda ama aysan carqaladeynin foornada la tuuray illaa dhammaan qodobada la tiriyo.
Ka dib ciyaar kasta marka la dhammeeyo (haddii uu qof guuleysto ama haddii ay jirto gacan madhan), dabaysha la xidhiidha ciyaartoy kasta ayaa la rogaa (dabaysha, maahan ciyaartoy, marka laga reebo haddii wareega dhammaado).
Ciyaaryahankii Bari ahaa Waqooyi ayuu noqonayaa, Cayaaryahankii Koofur ahaa Koofur wuxuu noqdaa Bari, Galbeed wuxuu noqdaa Koofur iyo Waqooyiga ilaa Galbeed.
Dhamaadka wareeg kasta
Dhamaadka wareeg kasta, marka lagu daro wareejinta dabaysha, waxaa jira isweydaarsi ku saabsan boosaska ciyaartoyda. Ujeedada laga leeyahay isbadalada kursigan ayaa ah in la hubiyo in ciyaartoy kasta uu leeyahay bidix iyo midig ee mid kasta oo ka mid ah ciyaartoydii kale ee ciyaarta oo dhan.
Dhamaadka wareegga dabaysha bari iyo ka hor intaan la bilaabin wareegga dabaysha Koonfurta, Ciyaaryahankii hadda noqon lahaa Bariga mar kale iyo kii Koonfur ahaan lahaa ayaa boosaskoodii la beddelay. Ciyaartoyda Galbeedka iyo Waqooyiga ayaa sidoo kale isku badalay boosaskooda.
Dhamaadka wareegga dabaysha koonfureed iyo intaadan bilaabin wareega dabaysha galbeed, Ciyaaryahankii hadda noqon lahaa Bari wuxuu aadi lahaa kursiga ciyaaryahanka reer Galbeedka, kan Koonfurta ka noqon lahaa kan Waqooyiga, ciyaaryahanka Galbeedka ee Koonfurta iyo Waqooyiga ilaa Bariga.
Dhamaadka wareegga dabaysha galbeed iyo ka hor intaan la bilaabin wareegga dabaysha woqooyiCiyaaryahankii hadda ahaan lahaa Bari iyo kii Koonfur ahaan lahaa ayaa boosaskoodii la beddelay. Sidoo kale, Ciyaartoyda Galbeedka iyo Waqooyiga ayaa boosaskooda isku weydaarsan doona.
Waxay u muuqan kartaa wax aad u jahwareersan (waana waa), laakiin sidan oo kale dhamaan ciyaartoyda waxay ka badalaan kuwa ka soo horjeeda bidix iyo midig, taas oo ka hortageysa isku aadka dabaysha bilowga ciyaarta inay calaamadeyso deriskeena ciyaarta oo dhan.
Nota: Hal dariiqo oo lagu ogaan karo in kursiga isbedelkiisa si sax ah loo sameeyay ayaa ah in ciyaariyahanka Koonfurta helay markii uu dabeylaha ka celinayo inuu noqdo ciyaaryahanka Bariga bilowga koonfurta. Midka Galbeed helay waa inuu noqdaa Bariga marka la bilaabayo wareegga Galbeedka, iyo cid kasta oo Waqooyiga heshay waxay noqonaysaa markii uu woqooyiga bilaabmay.
Tus ubaxyada bilowga ah
Ciyaaryahan kasta, markiisa, waa inuu muujiyaa inay ubax leeyihiin (iyagoo u yeeraya "Ubax" ama "Ubax") ama aan lahayn ubaxyo ("Ma lihi", "Ma lihi ubax" ama "Ubax ma leh"). Ka dib markaad ka qaadatay calaamadaha ubax dhamaadka darbiga, ciyaartoy kasta waa inuu ku dhawaaqaa inaysan haysan ubaxyo dheeri ah ("Ubax dambe ma leh" ama "Ubax dambe ma leh")
Ciyaaryahanka Este Wuxuu leeyahay Ubax iyo Calaamado xilliyadeed, sidaa darteed wuu tusi lahaa isagoo uga tagaya midigtiisa oo ka qaadanaysa calaamo kale darbiga xaggiisa dambe (wuxuu helaa 5 Digsi). Marka la qaato calaamadda dheeriga ah, ciyaaryahanka Bariga waa inuu cod dheer ku sheegaa inuusan ubax dambe haysan.
Markuu ahaa ciyaariyahanka markiisa On Waa inaan cod dheer ku idhaahdaa ubax ma leh.
Sida Bariga, ciyaaryahanka Oeste, waxay leedahay ubax iyo astaamaha istaanka (waxay leedahay 2 astaamo ubax ah), iyo markii laga qaadayo dusha dheeriga gidaarka, laba taayil oo isku mid ah oo ka mid ah Calaamadaha ayaa soo bixi lahaa. Ka dib markii la sawiray foornada beddelka, Reer Galbeedku waxay dhihi lahaayeen ubax dambe ma leh.
Markaa ciyaaryahanka ayaa markiisa noqon lahaa Waqooyiga. Sidoo kale ubax ma leh, marka waxaan cod dheer ku oran lahaa ubax ma leh.
Ciyaarta ayaa bilaabmaysa
Ciyaaryahanka Bariga waa kan ugu horreeya ee tuura foornada. Ciyaaryahanka Bariga ayaa duubaya calaamadda bamboo 3, isaga oo hor dhigaya:
Maaddaama astaamaha 3 bamboo uu doonayo laacibka Koonfurta oo aysan jirin cid kale oo weydiisata, wuu qaataa oo wuxuu sameeyaa Chi (2-3-4 oo Bamboo ah), isagoo uga tegaya midigtiisa araggiisa iyo iyadoo 3-da Bamboo la jeedsaday (baxa calaamadda bidix ee tilmaamaysa inay ahayd ciyaaryahanka bidixdiisa, Bariga, kaas oo tuuray).
Maaddaama Koonfurta ay qaadatay qashin, kama xadi karto derbiga. Hadda waa inuu iska tuuraa calaamadda, oo uu rogrogaa 9ka goobo.
Si kastaba ha noqotee, 9 of Circle token ayaa daneynaya ciyaaryahanka Waqooyiga inuu sameeyo Kong. Sidaa darteed, ciyaaryahanka reer Galbeed markiisa waa laga boodi doonaa, ciyaaryahanka woqooyiga ayaa tusi doona dhaq dhaqaaqiisa (waa inuu muujiyaa koonkan, maadaama uusan qarsooneyn), isagoo mid ka mid ah Bamboo 9 ee bartamaha isku darka u weecinaya (tan iyo markii uu tuuray. Ciyaaryahanka hortiisa jooga, Koofurta) oo wuxuu ka qaadan doonaa gabal dheeri ah darbiga dushiisa (tan iyo markii la sameeyay Kong, gabal dheeri ah waa in laga soo bixiyaa dhamaadka darbiga). Wuxuu helaa 7 astaamo.
In kasta oo hadda ay noqon laheyd ciyaaryahanka Waqooyiga inuu calaamadda tuuro, wuxuu go'aansaday inuu muujiyo Kong qarsoon (sidaa darteed wuxuu u jeedinayaa 4-da calaamadood oo hoos u dhacaya) wuxuuna qaadan lahaa calaamado kale oo dheeri ah.
Ka dib markii uu calaamadiisa ka qaatay darbiga (wuxuu helayaa 1 Wareegyo ah), Ciyaaryahanka Waqooyiga waa inuu iska tuuraa calaamada, ka dib, haddii aysan cidna xiiso u laheyn, ciyaaryahanka Bariga ayaa ciyaari lahaa, isagoo ka qaadanaya calaamadda derbiga, iyo wixii la mid ah. Cayaartu way dhammaatay markii hal ciyaaryahan uu sameeyo Mahjong ama dhammaan dusiyihii ayaa la isticmaalay (ma jiro gacan).
Riwaayado iyo Dhibcahooda
Gudaha RCM waxaa jira 81 ciyaarood, oo qiimihiisu yahay 1 dhibic ilaa 88 dhibcood. Iyagaa loo baahan yahay 8 dhibcood inuu awoodo inuu sameeyo Mahjong.
Haddii ciyaartoy ku xidho sharooto uu tuuray mid kale, wuxuu ka helayaa ciyaaryahanka dhibcaha gacantiisa, oo lagu daray 8 dhibcood oo dheeri ah oo ka timaada dhammaan ciyaartoyda (oo uu ku jiro kii tuuray lebenka oo oggolaaday inuu xirmo).
Haddii uu ku xiro foornada darbiga laga soo jaray, wuxuu ku darayaa 8 dhibcood dhibcaha gacantiisa wuxuuna ka helayaa lacagtaas mid kasta oo ka mid ah 3da qof ee ka soo horjeeda.
tuurid Laga soo bilaabo derbiga
Tuur Qodobbada Guusha + 8 -
Naso 8 -
oo dhan - Qodobbada Guusha + 8
Mabaadi'da guud ee isku dhafka riwaayadaha
Dhibcaha riwaayadaha ay ku jiraan kuwa kale
Marka dhaqaaq la sameyn karin iyadoo aan lagu darin mid kale, tallaabada horey loogu soo daray dhibco ma lahan.
Mabda'a ka saarida ama mamnuuca isticmaalka soo noqnoqda ee riwaayad
Haddii laba ama saddex isku-darka loo adeegsado dhaqaaq, ugu badnaan mid ka mid ah isku-darkaas ayaa loo isticmaali karaa in loogu isticmaalo isku-darka kale oo lagu sameeyo dhaqdhaqaaq cusub.
Waa lagu dari karaa: 1 dhibic oo loogu talagalay Laba Caanood oo Dhamaystiran Bamboo Qafiif ah, 1 dhibic oo loogu talagalay Laba Calaamadood oo Saafi ah Dhamaadka Chis iyo kaliya 1 dhibic oo loogu talagalay Isku-dhafka Isku-Dhafka ah (1-2-3 ee Bamboo iyo 1-2-3 Calaamadaha) Suurtagal ma noqonayso in 7-8-9 Bamboo iyo 7-8-9 Calaamadaha loo adeegsado mar kale qodob kale oo isku dhafan oo loo yaqaan 'Mixed Double Chow', maadaama aan horeyba u adeegsannay mid ka mid ah isku-dhafka riwaayadaha laba Terminal Saafi ah (1-2 -3, labadaba Bamboos iyo Characters).
Riwaayado ku lug leh gacan qarsoon
Riwaayadaha dabeecadda qarsoon, dhibcaha laguma darin Gacan Qarsoon, in kastoo lagu dari karo Gacan gebi ahaanba qarsoon.
Riwaayaddan ayaa kala ah: Tiles la isku tolay oo sharaf lasaaray, Taayilooyin lagu tolay sharaf badan, 7 lammaane, 4 feer oo qarsoon, sagaal irridood, 7 lammaane daahir ah oo is daba joog ah iyo 13 agoon ah.
Isku dhafka Kong
Laba Kong oo la qaawiyey waxay u qalmaan 4 dhibcood.
Kong Exposed ah oo lagu daray Hidden Kong wuxuu u qalmaa 6 dhibcood.
Laba Hidden Kong ayaa u qalma 8 dhibcood.
1. Isku Mid ah Chi
Laba jaranjaro isku suud ah iyo isku xigxig nambar.
2. Isku Qasan Chi
Laba jaranjaro laba suud oo kala duwan, laakiin isku tiro isku mid ah.
3. Jaranjarada Gaaban
Laba Chis oo isku mid ah, oo leh tirooyin isku xigxiga oo isku xigxiga.
4. Laba Chis oo Terminal Chis ah
Jaranjarooyinka 1-2-3 iyo 7-8-9 oo isku mid ah.
5. Malax Terminal ama Dabaylo
Gacanta ay kujiraan Pung of Terminals (tirinta 1 iyo 9) ama Dabaylo, oo aan ka aheyn midkood Dabaysha iska leh ama Dabaysha Haysata (Dabaylaha wareega).
6. Kong Soo Bandhigay
Kong waxaa laga helay calaamad la tuuray ama lagu daro calaamadda Pung horay loo soo bandhigay. Fiiro gaar ah: Tuuris lama soo jiidan karo si loo balaariyo Pung dabacsan.
7. Qoyska maqan
Gacan aysan ku jirin jajab 1 ka mid ah 3 nooc ee ku habboon. Taasi waa in la yiraahdo, gacanta oo leh kaliya 2 suudh. Waxay qaadi kartaa sharaf.
8. Maamuus sharaf
Gacan ka kooban astaamaha dharka oo keliya, oo aan lahayn astaamo sharaf. Taasi waa, ma jiraan Dabeylo ama Dragons.
9. Sug Edge
Sugitaanka 3 ama 7 si loo sameeyo Chi leh 1-2 ama 8-9. Gacantani ma ansaxayso marka lagu daro nooc kasta oo Sug ah (tusaale ahaan, sugitaanka in lagu xidho 7-7-8-9 chips ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin isku darka Edge Wait iyo Simple Wait, maadaama loo qaadan karo midka 7aad waa inuu sameysmo 7-8- 9 ama labada lammaane 7-7).
Fiiro gaar ah: Dhibcaha haynta waxaa la bixiyaa oo keliya marka hal calaamadood loo baahdo.
Tusaale ahaan, sugitaanka inaad ku xirto kaliya Bamboo 7 oo leh:
10. Sug Sug
Ku Xidh Sug Sug (tusaale ahaan, adigoo haysta 2-4 oo aad 3 sugayso). Gacantani ma ansaxayso marka lagu daro nooc kasta oo Sug ah (tusaale ahaan, sugitaanka in lagu xidho 2-2-2-4 chips waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin isku darka Sugitaanka Xiran iyo Sugitaanka Fudud, maxaa yeelay waxay u adeegaan labadaba 3 iyo a 4). Si kastaba ha noqotee, isku darka sugitaanka (tusaale ahaan, 6-7-7-8-9 iyo sugitaanka 8 waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin iskudhaf Edge Wait iyo Closed Wait, laakiin kaliya calaamada 8 ayaa adeegta si loo xiro).
Tusaale ahaan, haddii lagu xiri karo oo keliya 5 wareeg oo leh:
11. Sug Sug
Ku xir kaarka sameeya labada lamaane. Talaabadani ansax ma aha marka lagu daro nooc kasta oo Sug ah (tusaale ahaan, sugitaanka in lagu xidho 2-2-2-4 chips waxaa loo tixgeliyaa inay tahay isku darka Sugitaanka Xiran iyo Sugida Fudud, maadaama ay u adeegaan labadaba 3 iyo a 4). Sidoo kale lama aqbali karo haddii laba ikhtiyaar la filayo inay ku xirmaan labada lamaane (tusaale ahaan, 6-7-8-9 oo laga filayo 6 ama 9).
12. Xir gidaarka
Ku xir calaamadda laga qabtay darbiga.
13. Ubaxyada iyo xilliyada Calaamadaha
Ubax kasta wuxuu u qalmaa 1 dhibic. Waxaa lagu tiriyaa dhamaadka wadarta dhammaan qodobbada. Uma adeegaan dhibcaha ugu yar ee 8 dhibcood. Waa la soo bandhigi karaa markasta oo aad rabto. Iyaga ayaa looga tagay dhinaca midig (sida dhaqdhaqaaqyada intiisa kale iyo marmarka la soo bandhigo) waxaana leylinta laga soo qaadayaa darbiga hoostiisa. Haddii ciyaaryahanka uu ku xiro calaamadda cusub, dhibic ayaa loogu darayaa Xiritaanka Gidaarka.
14. Fangaska Dragons
Pung (ama Kong) oo Dragons ah. Waa la qarin karaa ama la kashifi karaa.
15. Duufaan Dabaysha Haysata
Pung (ama Kong) ee dabaysha xukunta, taas oo u dhiganta dabaysha wareega. Waa la qarin karaa ama la muujin karaa.
16. Laab dabaysha leh
Fung (ama Kong) ee dabaysha u gaarka ah Waa la qarin karaa ama la muujin karaa.
17. Gacan qarsoon
Dhammaan isku-darka ha la qariyo oo ha lagu xiro leben la tuuray.
Gacan ka kooban oo keliya Chis oo aan lahayn Maamuus.
19. Tab lagu kaydiyay
Adeegso 4-ta faleel ee leben la siiyay, adigoon ku dhawaaqin Kong (taasi waa, inaad u isticmaasho inaad ku dhaqaaqdo dhaqaaqyo kale). Kong qarsoon ama soo ifbaxay looma tirinayo inuu yahay Hoard Token.
20. Isku Qasan Pung
Gacantu waxay ka kooban tahay laba Pung ama Kong oo isku tiro ah (laakiin sida iska cad oo ku habboon).
21. Laba Fangad Qarsoon
Gacantu waxay ka kooban tahay laba Pungs oo aan soo shaac bixin (taas oo ah, inaan lagu samayn jajab la tuuray). Kong qarsoon uma qalmo Pung qarsoon.
22. Kong qarsoon
Gacan ka kooban 4 doolsho oo isu dhigma, midkoodna aan tuurin, oo lagu dhawaaqay Kong. Dhammaan miisaska wejiga ayaa loo jeestay.
23. All Fudud
Gacan aan lahayn astaamo Terminal ama calaamado sharaf. Dhammaan jajabyada gacanta ku jira waa Fudud (jajabyo 2-8).
24. Gacan-ku-haynta Terminallada iyo Maamuusta (oo dhammaantood leh maamuus iyo / ama saldhigyo)
Gacanta oo ay ku jiraan ugu yaraan hal marmar Terminal ama hal Sharaf marka la isku daro, oo ay ku jiraan labada lamaane.
25. Gacan Dhamaystiran oo Qarsoon
Gacan lagu dhammaystiray dhammaan dusiyihii laga soo dhejiyay gidaarka, oo ay ku jiraan labada lamaane.
26. Laba Koong La kashifay
Gacantu waxay ka kooban tahay laba koong oo la soo bandhigay.
27. Tab Dambe
Ku xir foornada la tuuray ee ah tan ugu dambeysa noocaas hadhay (tusaale ahaan, haddii ay horey u ahaan jireen
la tuuray ama ay u isticmaaleen ciyaartoy kale isku darka saddexda qaybood ee 4 ee Bamboo, kuna dhow gabaldhaca ugu dambeeya 4 ee Bamboo). Laguma dari karo Kong Robo.
28. All Fung
Gacanta waxaa sameeyay 4 Pung (ama Kong) iyo labada lammaane.
29. Semipura Hand (Gacanta Saafi ah oo sharaf leh)
Gacanta ay ku jiraan jibbaarada mid ka mid ah saddexda dacwadood, oo ay weheliso jajabyo sharaf leh.
30. Saddex Kaftan Isku Jir Ah Oo Iskuwaagsan
Gacan ka kooban saddex Chis oo ka mid ah saddexda dacwadood, isla markaana ay jajabyadooda bilowgu ku jiraan xilli tallaabo u dhexeysa.
31. Dhamaan Qoysaska iyo Maamuusta
Gacanta waxaa sameeyay iskudhafyo ay ka muuqdaan astaamaha 5ta nooc ee ciyaarta kujira. Saddexda habboon: Characters, Disks, Bamboos, oo lagu daray Dabeylo iyo Diragyo.
32. Gacan la kashifay
Gacan kaas oo isku-darka kasta lagu dhammaystiray jajabyo ay iska tuureen ciyaartoy kale, oo ay ku jiraan labada lamaane. Waxaa lagu dari karaa dhibcaha Sugitaanka.
33. Laba Dragons
Gacantu waxay ka kooban tahay laba Pung (ama Kong) oo Dragons ah.
34. Laba Kangar oo qarsoon
Gacan ay ku jiraan laba kong oo aan soo shaac bixin.
35. Jaranjaro isku dhafan
Toos ah (dusiyeen 1 illaa 9) oo ay sameeyeen Chis saddexda dacwadood. Waxaa lagu dari karaa Todo Chi.
Gacanta oo ka kooban iskudhafyo lagu sameeyay dusiyo si toos ah isu eg (taasi waa, taararkaas kuwa u eg isla wejiga kor iyo hoos u jeeda: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 of Discs, 2, 4, 5, 6 , 8, 9 of Bambúes and the White Dragon). Qodobka loogu talo galay Maqnaanshaha Qoyska ayaa lagu daray.
Gacan leh saddex Chis oo isle'eg, laakiin suudhyo kala duwan.
38. Sadex Miir Ah oo Xinjiro Xanjo Leh
Gacantu waxay ka kooban tahay seddex Pung ama Kong, mid kasta oo ka mid ah suudh kala duwan iyo lambar ka weyn kan hore.
39. Gacan madhan
Gacan aan dhibco lahayn. Dhibcaha Ubaxa laguma xisaabtamayo dhibcahaan. Ubaxyada waxaa lagu daraa 8da dhibcood ka dib si ay u guuleystaan.
Xidhitaanka, tusaale ahaan, iyadoo la tuurayo 3-da Bamboo (oo aan ahayn qaybtii ugu dambaysay ee saddexda ah), iyo inaanay ahayn gacan qarsoon iyo mid la soo bandhigay toona. Sidaas awgeed waa la oofiyey inaysan ahayn All Chi, ama All Pung, ma jiraan wax dhibco ah Sug, ama Pung of Terminals ama Honors, ama for Token Last, iwm.
40. Tabta Dambe ee gidaarka
Ku xir foornada ugu dambeysa derbiga. Laguma dari karo Darbiga Xidho.
41. Tuur Tokenka U Dambeeya ee Gidaarka
Ku xir qashinka weelka ugu dambeeya gidaarka.
42. Ku xir Token Dheeraad ah
Ku xir calaamadda dheeriga ah ee la qaatay ka dib markaad heshay Kong.
43. Kong Dhac
Ku xir calaamadda la xaday ee loogu talagalay ciyaartoy uu ka soo gudbiyay Pung una gudbay Kong. Laguma dari karo Gacanta oo Dhamaystiran
44. Tokens tolmo sharaf leh
Gacan ka sameysan talooyinka soo socda: 5 ama 6 Maamuus (oo aan lammaaneyn) oo ay weheliso qayb ka kooban 8 ama 9 dusiin tolmo leh Iyada oo leh astaamaha '7 Honors', ruwaayadda waxaa loo yaqaan 'Sewn Tokens with Grand Honors'. Gacantu waa inay qarsoon tahay, in kastoo aysan u baahnayn inay gebi ahaanba qarsooto, taasi waa, taallo la tuuray ayaa loo soo jiidi karaa si loo xiro. Laguma dari karo Dhamaan Qoysaska ama Gacanta Qarsoon.
45. Tokens Tokens
Cayaar khaas ah oo ka kooban jajabyo 1-4-7 oo hal suud ah, 2-5-8 oo dacwad kale ah iyo 3-6-9 oo dacwad saddexaad ah. Gacantu maahan in la qariyo (sida iska cad, tuuritaan ayaa la soo jiidan karaa iyada oo aysan xirmin isku-darka afaraad, oo aan loogu talagalin dusiyeyaasha). Waxaa lagu dari karaa Todo Chi.
46. ​​Kan Sare 4
Gacan kaliya leh jibbaarada 6 illaa 9. Meesha Meel Maamuus Majiro ayaa ku jirta.
47. Hoose 4
Gacan kaliya leh jibbaarada 1 illaa 4. Meesha Meel Maamuus Majiro ayaa ku jirta.
48. Saddex dabayl oo waaweyn
Gacanta waxaa ka mid ah 3 Dabayl Dabayl ama Kong.
49. Jaranjarada daahirka ah
Gacanta waxaa sameeyay 1-9 toosan oo jajab ah oo isku mid ah, oo sameysmaya 3 Chis oo isku xigta.
50. Chis xad dhaaf ah oo 3 qoys ah
Gacanta oo ka kooban Chows 1-2-3 iyo 7-8-9 oo hal suud ah, Chows 1-2-3 iyo 7-8-9 oo dacwad kale ah iyo labo ka mid ah 5 ka mid ah dacwadda saddexaad ee harsan. Dhibcaha isku dhafan Double Chi, Laba Cish Terminal Chis, Maamuus la'aan iyo Dhamaan Chi ayaa horeyba loogu daray.
51. Chis Shisheysan oo Seddex Leh
Gacan ka kooban saddex Chis oo isku mid ah, mid walbana leh gabal bilaw ah oo ka bilaabmaya lambar ama laba ka weyn bilowga hore ee Chi, laakiin ma aha isku dar ah labadaba (taasi waa, ama saddexda Chis waxay la socdaan qaybo bilow ah bareeg mid ama dhammaan seddax Chis ay ku jiraan inta u dhexeysa labo).
52. Dhamaan 5
Gacan ay ku jiraan isku dar kasta oo ay ku jiraan 5 (oo ay ku jiraan labo).
53. Isku Qasan Triple Pung
Gacan leh seddex leeg oo Pung ah (ama Kong), laakiin mid kasta oo le'eg midkood.
54. Saddexda Qarsoon ee Fangaska
Gacanta oo ay ku jiraan saddex Pungs aan la shaacin (qarsoon Kong aan la tirin).
55. Toddoba lamaane
Gacan ka kooban toddoba lammaane oo jajab ah. Had iyo jeer waxay ku dhammaataa Sugitaan fudud. Sharooto la tuuray ayaa loo soo jiidan karaa inay ciyaarta joojiso. Laguma dari karo Dhammaan (Pung of) Lammaane, Gacan Qarsoon, ama Gacmo Fudud oo Fudud. Waxaa lagu dari karaa Dhammaan Qoysaska, Gacanta Dhamaystiran ee qarsoon, Token kaydsan, Majiro Sharaf, Dhammaan Fudud, 1 Qoys oo La Waayay, Dhammaan Terminaallada, ama Dhammaan Maamuusta.
56. Tokens lagu tolay sharaf weyn
Gacanta ay samaysay mid kasta oo ka mid ah toddobada Maamuus (oo aan ku celcelin lahayn) iyo dusiisha saddexda dacwadood oo ka kooban taxane ah toddobo faleel tolmo leh (taas oo ah, in aad haysato toddobo taallo oo ka mid ah sagaalka ay ka kooban tahay gacanta taallo tolan: tiles 1- 4-7 oo ah hal suud ah, 2-5-8 oo dacwad kale ah iyo 3-6-9 oo dacwad saddexaad ah). Gacantu waa inay qarsoon tahay. Laguma dari karo gacmo: Dhammaan Qoysaska, Gacanta Qarsoon, ama Suga Fudud.
57. All Peers (All Pung Peers) Dhammaan facooda
Gacanta ay samaysay Pung xitaa taayirrada (oo ay ku jiraan labada lamaane). Dhibcaha All Pung, No Honors iyo All Simple ayaa horeyba loogu daray. Waxaa lagu dari karaa Maqnaanshaha Qoyska ama Gacanta Nadiifka ah.
58. Gacan saafi ah
Gacan ka kooban gebi ahaanba jajab isku mid ah iyo sharaf la'aan. Qodobbada ka yimaadda Ma-sharfayaasha ayaa lagu daray.
59. Triple Chi Isku mid ah
Saddex Chis oo siman oo isku mid ah. Laguma dari karo gacanta Pung ee isdabajoogta ah.
60. Saddex Pung oo isku xigta oo daahir ah
Gacanta ku hayso seddex Pung (ama Kong) oo isku mid ah, mid kasta oo leh tiro ka badan hal unug marka loo eego kii ugu dambeeyay. Laguma dari karo Triple Chi isku mid ah.
61. Tababka sare
Gacan ka kooban isku-darka tiles-ka 7, 8 iyo 9 (oo ay ku jiraan labada lamaane). Dhibcaha No Maamuus waa lagu darayaa. Waxaa lagu dari karaa All Pung, Qoyska maqan ama Gacanta Nadiifka ah.
62. Tababka dhexe
Gacan ka kooban isku-darka tiles-ka 4, 5 iyo 6 (oo ay ku jiraan labada lamaane). Dhibcaha No Maamuus waa lagu darayaa. Waxaa lagu dari karaa All Pung, Qoyska maqan ama Gacanta Nadiifka ah.
63. Tabsyada Hoose
Gacan ka kooban isku-darka tiles-ka 1, 2 iyo 3 (oo ay ku jiraan labada lamaane). Dhibcaha No Maamuus waa lagu darayaa. Waxaa lagu dari karaa All Pung, Qoyska maqan ama Gacanta Nadiifka ah.
64. Afar Chis ah oo Talaabooyin ah
Gacanta afar Chis oo isku mid ah, mid kasta oo ka mid ah qaybaha bilowga ah ayaa ku dhacay hal ama laba lambar marka loo eego qaybta bilowga ee Chi hore.
65. Saddex koon
Gacan ay ku jiraan saddex Kong. Waa la qarin karaa ama la muujin karaa.
66. Dhammaan Maamuusta iyo Saldhigyada
Gacan ka kooban gebi ahaanba Terminal (tirinta 1 iyo 9) iyo Maamuus (Dabaylo iyo Diragyo). Dhibco dheeri ah looma oggola cayaaraha aasaasiga ah ee Dabaylaha iyo Terminalka. Dhibcaha All Pung, Terminal Pung iyo Honung Pung ayaa lagu daray. Waxaa lagu dari karaa Gacan Semi Saafi ah, Qoys maqan, Laba Diraajiin, Saddex Darood oo yar, Saddex Wanaagsan oo Wanaagsan, Saddex Dabayl, Afar Dabayl Yar ama Afar Dabayl Weyn.
67. Quadruple Chi isku mid ah
Gacanta waxaa sameeyay afar Chis oo isla eg oo isku mid ah. Qodobbada loogu talagalay Pung Staggered Pung, Hoard Token, iyo Pure Double Chi ayaa lagu daray.
68. Afar Fung oo isku mid ah oo daahir ah
Gacan ay ku jiraan afar Pung ama Kong oo isku mid ah, oo midba midka kale ku dhacay.
70. Afar Dabayl Yar
Gacanta ay ku jiraan saddex Dabayl (ama Kong) oo Dabaylo ah iyo labo ka mid ah haray dabaysha. Waxaa lagu dari karaa dabaysha Dominant iyo Dabaysha iska leh. Saddex dhibcood oo Dabeylo Wayn ah ayaa lagu daray.
71. Seddex Riwaayadood Oo Yar
Gacan ay ku jiraan laba Pung (ama Kong) oo Dragons ah, iyo labo ka mid ah Dragon kale. Dhibcaha per Pung of Dragons shaqsi lama tiriyo.
72. Dhammaan Maamuusta
Gacanta oo gebi ahaanba laga sameeyay Sharaf (Dabayl iyo / ama Dragons). Waxaa lagu abuuri karaa Pung ama Kong, qarsoon ama la muujiyey. Waxaa lagu dari karaa Dragon Pung. Qodobbada Todo Pung ayaa lagu daray.
73. Afar Fool oo qarsoon (Khasnad qarsoon)
Gacanta oo ay ku jiraan afar Fool oo aan soo bixin (ama Kong). Laguma dari karo Gacan si buuxda u qarsoon ama Doog dhan.
74. Chis xad dhaaf ah saafi ah
Gacan ka kooban laba Chis Hoose (1-2-3), laba Chis Sare (7-8-9) iyo labo ka mid ah 5, oo dhammaantood isku mid ah. Dhibcaha Gacanta Saafi ah, Toddoba Lamaane, Joojinta Chows iyo Saafi Laba-geesle ah ayaa ku jira.
75. Afar dabayl oo waaweyn
Gacan uu sameeyay Pung (ama Kong) afarta dabayl. Laguma dari karo All Pung ama Dominant Wind ama Self Wind Pung.
76. Seddex Jilayaal Weyn
Gacanta waxaa sameeyay Pung (ama Kong) oo ka mid ah 3 Dragons. Laguma dari karo Dragon Pung.
77. Dhammaan Cagaar
Gacanta oo ka kooban 2, 3, 4, 6, 8 alwaaxda Bamboo iyo, ikhtiyaar ahaan, Dragons Cagaaran. Waxaa lagu dari karaa Gacanta Saafi ah, Gacanta Nadiifka ah (haddii Dragons Cagaaran la isticmaalo), 7 Lammaane, Gacan Dhamaystiran oo Qarsoon, All Pung ama All Simple.
78. Sagaal Albaab
Gacanta ay sameeyeen jajabku 1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9 oo isku mid ah, oo laba ka mid ah ka dhigaya midkood. Gacantu waa inay qarsoon tahay. Laguma dari karo Gacanta Qarsoon, Gacanta Daahirka ah, ama Terminallada iyo Fangaska Maamuusta. Waxaa lagu dari karaa Gacanta oo Dhamaystiran.
79. Afaraad Koong
Gacan kasta oo leh 4 Kong. Waa la qarin karaa ama la kashifi karaa.
80. Toddoba Lammaane oo isku xiga oo daahir ah
Gacan ay ku samaysteen toddobo lammaane oo jajab ah oo isku mid ah oo lambarkoodu middag ku dhacaayo. Laguma dari karo Gacan nadiif ah, Gacan Si buuxda u Qarsoon, ama Sahlan oo Fudud.
81. Saddex iyo toban Agoon
Gacanta oo ka kooban taararka 1 iyo 9 ee Bamboos, 1 iyo 9 loogu talagalay Disk, 1 iyo 9 oo loogu talagalay Calaamadaha, iyo mid kasta oo ka mid ah toddobada Maamuus. Labada lamaane ayaa lagu sameeyaa mid ka mid ah jajabyada. Sharooto la tuuray ayaa loo soo jiidan karaa inay ciyaarta joojiso. Laguma dari karo Gacan nadiif ah, Gacan Si buuxda u Qarsoon, ama Sahlan oo Fudud.
Khaladaadka iyo ganaaxyada
Isku darka beenta
Haddii ciyaaryahan uu khalad sameeyo markii uu ku dhawaaqayay Chi, Pung, Kong ama qaadashada calaamadda bedelka, wuxuu luminayaa xuquuqda uu ku guuleysto ciyaarta (gacan dhintay), inkasta oo aad ciyaarta sii wadan karto, xatooyada tuurista, iwm.
Ciyaartoyda ma codsan karaan in la tuuro ka dibna maskaxdooda la beddelo. Marka ugu horeysa ee laguu soo wargaliyo, mar labaad ayay noqon doontaa la ciqaabay con 5 dhibcood (in la siiyo ciyaartoy kasta), kan saddexaad 10 dhibcood, kii afraad 20 dhibcood, iyo wixii la mid ah.
Taabashada lebenka gidaarka ka hor inta uusan laacibkii hore tuurin waxaa loo arkaa khalad. Marka ugu horeysa ee laguu soo wargaliyo, mar labaad ayay noqon doontaa la ciqaabay con 5 dhibcood (in la siiyo ciyaartoy kasta), kan saddexaad 10 dhibcood, kii afraad 20 dhibcood, iyo wixii la mid ah.
Haddii calaamadda la arki waayey, waa laga tagi doonaa meeshuu ahaa. Haddii calaamadda la arkay, laacibku ma awoodi doono inuu guuleysto ciyaartaas (gacan dhintay), inkasta oo aad ciyaarta sii wadan karto, xatooyada tuurista, iwm.
Weydiiso Pung with Delay
Codso calaamadda Pung oo leh wax ka badan Saacadaha 3 goor dambe ayaa loo arkaa qalad. Marka ugu horeysa ee laguu soo wargaliyo, mar labaad ayay noqon doontaa la ciqaabay con 5 dhibcood (in la siiyo ciyaartoy kasta), kan saddexaad 10 dhibcood, kii afraad 20 dhibcood, iyo wixii la mid ah.
Been Mahjong (Been Hu)
Haddii ciyaaryahanka uu leeyahay in ka yar 8 dhibcood waa inuu bixiyaa 10 dhibcood Ciyaaryahan kasta wuuna yeelan doonaa gacan dhintay, inkasta oo uu ciyaarta sii wadan karo, xatooyada qashinka, iwm.
Haddii ciyaaryahanka ma buuxinayo shuruudaha si aad u sameyso Mahjong qashin tuur (waxaad heysataa in ka badan 14 marmarka ama ka yar 14, qalad ku samee foornada xiran, iwm.), waa inaad bixisaa 20 dhibcood Ciyaaryahan kasta wuuna yeelan doonaa gacan dhintay, inkasta oo uu ciyaarta sii wadan karo, xatooyada qashinka, iwm.
Sidoo kale, dhammaantood jajabyada la muujiyay by cadeeye Mahjong been ah waa in la tuuraa Ciyaartoyga soosocda
Tabobyada la muujiyay
Dhammaan tab muujiyey ciyaaryahan ahaan (waxay ku dhacdaa markii uu ka xado gidaarka, wuxuu ku dhex tuuraa inta u dhexeysa jajabyada gacantiisa ku jira, iwm.) waa in la tuuraa ciyaaryahanka xiga.
Haddii ay dhacdo in ciyaaryahan tus jajabyadaada oo dhan marka ciyaaryahan kale ku dhawaaqo Mahjong inuu gelayo khalad. Hadday ugu dambayntii ciyaartoygii ku dhawaaqay Mahjong gana, Ciyaaryahankii tusay Chipskiisa ayaa noqon doona kula taliyay.¿ Ciyaaryahanka kale miyaanu guuleysan? waa inuu tuuraa jajabyada la muujiyay mid mid.
Haddii ciyaaryahan wuxuu muujiyaa feyl kale, waa inaad bixisaa ciyaaryahanka dhaawacmay inta udhaxeysa 5-60 dhibcood uu go'aansaday garsooraha (kaas oo sidoo kale go'aansan doona inuu ciyaarta sii wado iyo inkale).
Tirada aan sax ahayn ee Tokens
Haddii ciyaaryahan uu leeyahay wax ka yar 13 marmar ama in ka badan 13 inta u dhaxeysa leexashada, waxay leeyihiin gacan dhintay, inkasta oo uu ciyaarta sii wadan karo, xatooyada qashinka, iwm.